KPZ: Ribbon of AutoCAD 2009
Ribbon of AutoCAD 2009
AutoCAD 2009 က Ribbon တွေအကြောင်းကို ဆက်လက်လေ့လာ ကြည့်ရအောင်။ AutoCAD 2009 Version မှာ Ribbon ပုံစံတွေဟာ တစ်ခြား ဗားရှင်းတွေနဲ့ မတူအောင် အလွန်ကို ကွဲပြားခြားနားလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Microsoft Office 2007 ကို အသုံးပြုဖူးတဲ့ သူဆိုရင်တော့ ဒီပုံစံကို ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Command လေးတွေပါဝင်တဲ့ Tools လေးတွေကို Ribbon မှာစုစည်းထားပြီး အဲဒီ့ Tools လေးတွေကို Tabs ပုံစံနဲ့ ပြန်လည်စုစည်းထားပါတယ်။ ဒီ Ribbon လေးတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် အမျိုးမျိုး ပြုပြင်ဖန်တီး ပြင်ဆင်နိုင်တာ် ဆိုတာကို ဒီ Ribbon ဗီဒီယိုဖိုင် ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းလင်းသွားမှာပါ။
MyMetro - September 29, 2008 at 12:57 AM
Anonymous - September 14, 2009 at 11:39 PM
အမရေ...၀င်းဒိုး vista 64bit အတွက် autocard soft လေး အဆင်ပြေတာလေး ရှိရင် လမ်းညွန်ပေးပါဦး...ကျေးဇူးဗျို့
johnmoe06 - March 20, 2010 at 5:45 PM
i have respected about your knowledge. waiting your new posts. thank you!
You are viewing "Ribbon of AutoCAD 2009"